देशका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यागे प्रचण्डले ! – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठUncategorizedदेशका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यागे प्रचण्डले !
देशका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यागे प्रचण्डले !
– मिलन ढुंगाना
नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । हरेक राजनीतिज्ञको चाहना हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने, सरकारको नेतृत्व लिने । एकपटक प्रधानमन्त्री बनेकाहरु फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना र लक्ष्य हुन्छ, यो स्वभाविक पनि हो । दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका धेरै नेताहरु छन् । जसमध्ये एक हुन्, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरलाई त्यागेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकीकरण हुँदा एउटा शर्त अर्थात भद्र सहमति थियो, ओली र प्रचण्डले सरकारको पालैसँग नेतृत्व लिने । दुई पार्टीबीच एकताले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपाले बहुमत ल्यायो । बहुमत ल्याएको पार्टी नेकपाले संघीय संसदमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त ग¥यो । स्थानीय तहमा नेकपाकै बाहुल्य रह्यो भने सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार नेतृत्व लियो । नेकपा शक्तिशाली पार्टी बन्दै सरकार चलाइरहेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व लिने अवसरलाई अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा साटे । उनी अहिले नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।
प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पदकै लागि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व साटेका हुन् त ? प्रचण्डनिकट नेताहरुअनुसार मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यागेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना देखाएको र उनले लिएको कार्यक्रम मुलुक र जनताका लागि हितकर रहेको ठानेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई सघाउन तयार भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री परिवर्तनले जनतामा राम्रो सन्देश पनि नजाने निष्कर्षका साथ प्रचण्डले ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न तयार भएका नेताहरुको भनाइ छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार आफ्नै पार्टीको रहेका बेला मुलुक र जनताको चाहना र इच्छाअनुसारको काम नभएमा आगामी निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको नेताहरुको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीकै लागि नेताहरुको लडाइँलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमै निरन्तरता दिने र प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नेकपाले निर्णय गरेको सत्तारुढ नेताहरुको भनाइ छ । तर, नेकपाको सो निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दलसहित केही विश्लेषकहरुले फरक ढंगले विश्लेषण गर्दै प्रचण्डको कमजोर राजनीति भनेका छन् । – क्यानाडा नेपाल